AnkerWork B600 ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ခြင်းအတွက် ဝဘ်ကင်မရာ [ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း] | သတင်းပစ္စည်းများ
streaming နှင့် telecommuting အတွက် webcam AnkerWork B600 [သုံးသပ်ချက်]
Miguel ဟာနန်ဒက်ဇ် | 01/05/2022 18:00 | ယေဘုယျ, reviews
Anker သည် MagSafe အားသွင်းကိရိယာများ၊ ကိရိယာများ နှင့် အသုံးပြုသူအမျိုးအစားအားလုံးအတွက် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများပုံစံဖြင့် အခြားရွေးချယ်စရာများနှင့် ရွေးချယ်စရာများစွာကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ သူတို့ပေးသော အရည်အသွေး၊ ထို့ကြောင့် ဤအခါသမယတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤအမျိုးအစား ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြင့် နောက်တစ်ကြိမ် ဖောက်ပြန်သွားပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အလင်း၊ မိုက်ခရိုဖုန်းနှင့် စပီကာများပါရှိသော တယ်လီဖုန်းနှင့် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်းအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် AnkerWork B600 ဝဘ်ကင်မရာကို နက်နက်နဲနဲ ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပါသည်။ သင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကို မြှင့်တင်ရန် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအဖြစ် နေရာယူထားသောကြောင့် လက်လွတ်မခံပါနှင့်။
3 တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သော software များ
6 အကောင်းအဆိုး cons
ဤ Anker ကင်မရာအသစ်သည် ၎င်း၏ယခင်စက်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့မြင်နေရသည့် အဝိုင်းထောင့်ပုံစံစတုဂံပုံစံကို အမွေဆက်ခံပါသည်။ Anker ၏ကျန်ရှိသော "unboxings" ကဲ့သို့ပင်၊ ကေဘယ်များကဲ့သို့သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများတွင်ပင်တည်ဆောက်မှုအဆင့်တွင်ပထမအခိုက်အတန့်မှအရည်အသွေးကိုသိမြင်သည်မှန်သော်လည်း။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ပါဝါနှင့် ရုပ်ပုံထုတ်လွှင့်မှုအတွက် လိုအပ်သော USB-C ပေါက်နှစ်ခုအပြင် အထိုင်အဖြစ် လုပ်ဆောင်ပေးမည့် USB-A ပေါက်တစ်ခုလည်း ကျွန်ုပ်တို့တွင် တွေ့ရှိရသည်။. ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်၊ ပတ်၀န်းကျင်သည် ၎င်း၏ပေါင်းစပ်စပီကာများ၏အသံကို မှန်ကန်စွာထွက်ဆိုနိုင်ရန် ချည်မျှင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် webcam ကို မည်သည့်စခရင်၏ထိပ်တွင်မဆို ချိန်ညှိနိုင်စေမည့် မိုဘိုင်းအခြေခံတစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိုဘိုင်းဖုန်း သို့မဟုတ် ကင်မရာများအတွက် မည်သည့်စံနှုန်းကိုမဆို အောက်ခြေအခြေစိုက်စခန်းတွင် တပ်ဆင်နိုင်သည်။၎င်းသည် ဖန်သားပြင်သို့ အပြီးအပိုင် ချိတ်ဆက်ထားတော့မည် ဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်ရွေးချယ်ထားသော ရွေးချယ်မှု ဖြစ်ပါသည်။
ရှေ့ပိုင်းသည် ပတ္တာဖြင့်ဖွင့်ကာ မှန်ဘီလူးကို ကာကွယ်ပေးသည့် အလင်းရောင် LED အတွက်ဖြစ်သည်။ ဘေးနှစ်ဖက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့တွင် မိုက်ခရိုဖုန်းနှင့် အလင်းရောင်အတွက် ထိတွေ့ခလုတ်နှစ်ခုရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပလီကေးရှင်းမှလည်း ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
ဒီကင်မရာ ရှိတယ်။n 2K အမြင့်ဆုံး ရုပ်ထွက်အာရုံခံကိရိယာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်အရ ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သော်လည်း၊ တစ်စက္ကန့်လျှင် ပုံ ၃၀၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပိုမိုလုပ်ဆောင်ရန် သို့မဟုတ် ထုတ်လွှင့်ရန် မလိုအပ်သော်လည်း၊ အာရုံခံကိရိယာ အရွယ်အစားမှာ 1/2.8 လက်မရှိပြီး အလိုအလျောက် အလင်းဝင်စနစ်၊ အလိုအလျောက် အဖြူရောင်ချိန်ခွင်လျှာစနစ်၊ အလိုအလျောက် အာရုံစူးစိုက်မှု နှင့် လူတစ်ဦးကို ထောက်လှမ်းခြင်း နှင့် ခြေရာခံခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်တို့ ပါဝင်ပါသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျနော်တို့ရှိသည် 2W တစ်ခုစီ၏ စပီကာနှစ်လုံးနှင့် အတူ နှစ်လမ်းညွန် မိုက်ခရိုဖုန်းလေးခု စကားပြောဆိုသည့်အခါတွင် ကြည်လင်ပြတ်သားသော စတီရီယိုအသံကို ပေးဆောင်ရန်၊ အားလုံးသည် Auto Echo Cancellation နှင့် ခေါ်ဆိုမှုများအတွက် အသံကိုသာ ကြားနိုင်စေသည် ။ ဤ AnkerWork B600 သည် နောက်ပိုင်းတွင် ၎င်း၏ real-time စွမ်းဆောင်ရည်အကြောင်း ပြောဆိုသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် နည်းပညာဆိုင်ရာအဆင့်တွင် အတော်လေး ကောင်းမွန်စွာတပ်ဆင်ထားကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ကောက်ချက်ချပါသည်။
တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သော software များ
အနှစ်သာရအားဖြင့်၊ ဤ Anker AnkerWork B600 သည်ဖြစ်သည်။ Plug & Play လုပ်ပါ, ဆိုလိုတာက၎င်းကို port နှင့်ချိတ်ဆက်မှသာမှန်ကန်တဲ့အလုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ် USB မှတ်-C မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာမှ ၎င်း၏ ဉာဏ်ရည်တုစနစ်နှင့် autofocus စွမ်းရည်များသည် ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်အတွက် လုံလောက်သင့်သည်။ သို့သော်၊ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေသည်မှာ support software ရှိရန်အရေးကြီးပါသည်။ အကျင့် သင်အခမဲ့ download ရယူနိုင်သည်၊ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာများစွာတွေ့ရလိမ့်မည်၊ သို့သော်အရေးအကြီးဆုံးမှာ webcam software ကို update လုပ်ခြင်းနှင့်၎င်းအား၎င်း၏ထောက်ပံ့မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ဒီဆော့ဖ်ဝဲ၌ 68º, 78ºနှင့်95º၏ကြည့်ရှုထောင့်သုံးခုကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။ အဖြစ်အကြားသုံးဖမ်းယူအရည်အသွေးတွေအကြားရွေးချယ်ခြင်း အမျိုးမျိုးသောဆုံးဖြတ်ချက်များ FPS ကိုညှိခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖြတ်သန်းသွားသည် HDR နှင့် Flicker ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်ဆောင်ချက် LED မီးသီးများဖြင့် လင်းထိန်နေချိန်တွင် အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်၊ ဤကိစ္စများတွင် တုန်ခါမှုများသည် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သော အရာတစ်ခုအဖြစ် ထင်ရှားလေ့ရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ အထူးရှောင်ရှားရမည့်အရာဖြစ်သည်ကို သင်သိပါသည်။ အရာအားလုံးရှိသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် သီအိုရီအရ Anker ၏ AnkerWork B600 မှအများဆုံးရရှိမည့် ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်၍ ပုံသေမုဒ်သုံးမျိုးရှိသည်။
ဒီကင်မရာကိုသင်ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်သင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည် Anker ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် Amazon တွင်ရနိုင်သည်။ Anker Work ကို အမြန်တပ်ဆင်ပြီး ကင်မရာ၏ firmware ကို အပ်ဒိတ်လုပ်ရန် အခွင့်အရေးကို ရယူလိုက်ပါ။
ဤကင်မရာသည် CES 2022 တွင် ဆုနှစ်ဆုရရှိခဲ့ပြီး အတိအကျအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စားပွဲပေါ်ရှိ “Clunkers” အရေအတွက်ကို လျှော့ချနိုင်သည့် “All-in-One” နှင့် ၎င်းတို့ကို ပေါင်းစည်းပေးသည့်အတွက်ကြောင့် အတိအကျပင်ဖြစ်ပေသည်။ တစ်ခုတည်း။ ထို့အပြင် နယ်ပယ်အားလုံးတွင် ဤနည်းဖြင့် မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း၊ နည်းပညာလောကရှိ ယေဘုယျအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် လက်ရှိဖြစ်ရပ်များနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို မျှဝေသည့် အပတ်စဉ် iPhone News Podcast အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ မူရင်းကင်မရာဖြစ်လာပါသည်။
၎င်းသည် ၎င်း၏အရည်အချင်းကို သက်သေပြခဲ့ပြီး၊ အထူးသဖြင့် ၎င်း၏ LED မီးအလင်းရောင်စနစ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အအေးနှင့် အနွေးသံကြားမှ ဘွဲ့ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ ယခုဖော်ပြခဲ့သော ဤအရာသည် အတိအကျအသုံးပြုထားသော တစ်ခုတည်းသော အလင်းရောင်ဒြပ်စင်ဖြစ်သောကြောင့်၊
ကင်မရာတွင် VoiceRadar ပါရှိသည်။ ၎င်း၏မိုက်ခရိုဖုန်းကို အသုံးပြုရန် ဆုံးဖြတ်သည့်အခါ၊ ၎င်းသည် ခေါ်ဆိုမှု၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို ရှင်းလင်းပေးသည့် ပြင်ပဆူညံသံများကို ချေဖျက်သည့်စနစ်တစ်ခုမျှသာဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏စမ်းသပ်မှုများတွင် နောက်ခံဆူညံသံများကို ဖယ်ရှားကာ အပြန်အလှန်ပြောဆိုသူများကိုသာ အာရုံစိုက်လုပ်ဆောင်ရာတွင် အလွန်ထိရောက်ကြောင်းပြသထားသည်။ .
ထို့အပြင် ကင်မရာစနစ်ပါရှိသည်။ frame only, ၎င်းသည် လူတစ်ဦး၏ တိကျသောနောက်ဆက်တွဲတစ်ခုထက် မပိုပါ၊ ၎င်းတို့ကို ရှေ့ဆုံးတွင် အမြဲထားရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စမ်းသပ်မှုများတွင်၊ ၎င်းသည် အာရုံစူးစိုက်မှုအဆင့်နှင့် နောက်ဆက်တွဲကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်မှုနှစ်ခုလုံးတွင် အလွန်ထိရောက်ကြောင်းပြသခဲ့ပြီး၊ အလုပ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်နှင့်အတူလုပ်နိုင်ပါတယ်။ AnkerWork B600 သည် Anker ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ယူရို ၂၂၉ မှစတင်ပြီး၊ သို့မဟုတ် Amazon မှတဆင့် တိုက်ရိုက်ရောင်းချမှုအချို့တွင် ၎င်းကို သင်တွေ့နိုင်သော်လည်း၊
ထို့ကြောင့် ဈေးကွက်တွင် အပြည့်စုံဆုံးနှင့် စွယ်စုံရ All-in-One ကင်မရာများထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် နေရာယူထားသည်။ နှင့် Actualidad Gadget တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းကို အကြံပြုခြင်းမှလွဲ၍ အခြားမည်သည့်အရာကိုမျှ လုပ်ဆောင်၍မရပါ။
အပေါ်တင်ခဲ့သည်: 1 2022 မေလ
နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ချက်: 1 2022 မေလ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » streaming နှင့် telecommuting အတွက် webcam AnkerWork B600 [သုံးသပ်ချက်]
Doogee S98 Pro- အပူအာရုံခံကိရိယာနှင့် ဂြိုလ်သားဒီဇိုင်းဖြင့် ကင်မရာ